Sidee xooluhu u saameeyaan deegaanka | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Kala bixid
Lo’du waa xayawaan haybad leh oo inala joogay dhawr qarni, intii aan ku dhex jirnay ee aan u adeegsan jirnay una sii wadnay u adeegsiga dad. Si kastaba ha noqotee, Weligaa ma isweydiisay sida xooluhu u saameeyaan deegaanka?
Hadday jawaabtu tahay mid diidmo ah ama mid taban, markaa waxaan ka jawaabi doonnaa su'aashan xiisaha badan.
Qaybta xoolaha ayaa si ba'an u saameysa deegaanka. Sida lagu sheegay daraasad ay soo saartay FAO oo cinwaankeedu ahaa »Hooska Dheer ee Xoolaha», Waxay soo saartaa a 9% kaarboon laba ogsaydh ka soo jeeda hawlaha aadanaha, a 65% xabagta nitrous, a 37% methaneiyo 64% ammonia, taas oo gacan ka geysata aashitada roobka. Gaasaskani waa wax soo saarka digada, gaasaska xiidmaha iyo qashinka. Xaaladda ayaa kasii dareysa maadaama kaymaha iyo hawdka la jaray si ay u noqdaan dhul daaqsin ah oo xoolaha lagu quudiyo. Sidaas darteed, a 30% oogada dhulka. Kaliya Amazon, oo loo tixgeliyo sambabka dhulkeenna, 70% dhulka ayaa durba loo isticmaalaa xoolaleyda.
Ku saabsan ciidda, xooluhu waxay xaalufiyaan dhulka, isukeenistaan, xaalufiyaan oo ka dhigaan meel aad ugu nugul xaalufka. Intaas waxaa sii dheer, antibiyootikada iyo hormoonnada la siiyo, iyo sidoo kale bacriminta iyo cayayaanka loo isticmaalo in lagu buufiyo beeraha badarka, waxay gacan ka geystaan ​​wasakheynta dhulka iyo jawiga.
Beerista xooluhu waxay carqaladeysaa wareegyada biyaha, taasoo yareyneysa beddelka biyaha ee lakabyada sare iyo gudaha ee dhulka. Taasina waa dhibaato sii kordheysa marba marka ka sii badaneysa tirada dadka. Maskaxda ku hay taas waxsoosaarka hilibka iyo caanaha ayaa matalaya 20% biomass-ka berriga maanta; Haddii dadku sii kordho, dalabku sidoo kale wuu korayaa, sidaa darteed haddii aan tallaabooyin la qaadin, geedaha iyo dhirta waa la sii wadayaa in la jaro, iyadoo la ilaaway ama aan la doonayn in laga fikiro inaan lagu noolaan karin oksijiin la'aan, laakiin waxaan sameyn karnaa innagoo aan quudin hilibka lo'da.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Sidee xooluhu u saameeyaan deegaanka?
sida loo daliishado qodobkan?
muxuu ahaa taariikhda la daabacay maqaalkan? Waxaan u baahanahay inaan soo xigto.
Ku jawaab valentina daza